Inkqubo yaseMelika yokuThengisa ngokuThengisa-802Quits
Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA » AmaNdiya aseMelika
UNCEDO NGOKUSHISHINELA KUSHISHINO
Ukusetyenziswa kwesiko lecuba kwinkcubeko yaseMelika yaseIndiya kwahluke kakhulu kunokusetyenziswa okukhuthazwa ngabavelisi becuba. Ipesenti engalinganiyo yamaNdiya aseMelika asebenzisa icuba lokuthengisa xa kuthelekiswa namanye amaqela e-United States. Iinkampani zorhwebo zorhwebo zijolise kumaIndiya aseMelika kwintengiso, ukuxhasa iminyhadala kunye nokunikezela, ukuyila iindlela zokukhuthaza kunye nokusetyenziswa gwenxa kwemifanekiso kunye neengcinga ezivela kwinkcubeko yaseMelika yaseMelika.
Njengazo zonke izinto ezikhobokisayo, ukuba icuba lisetyenziswa gwenxa okanye lisetyenziselwa ukuzonwabisa, liyingozi. AmaNdiya aseMelika asebenzisa isiko lokusebenzisa icuba ayakuqonda oku kwaye anciphise ukusetyenziswa kwaso kwimibhiyozo. Amabali okuba kutheni icuba lanikwa amaMelika aseMelika kwimithandazo ihanjisiwe amawaka eminyaka. Ukusetyenziswa kwecuba lesiko kunceda ukudala unxibelelwano nezizukulwana kwakudala kwaye kuxhasa ubomi obulungileyo kunye noluntu olusempilweni namhlanje nakwikamva.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi icuba lesintu kunye nokusetyenziswa kwayo
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi icuba lokuthengisa
INKQUBO YASERMANYI YASHISHINO YASHISHINO LWASEKHAYA
Ukuyeka icuba lokuthengisa kunokuba nzima, kodwa uncedo luyafumaneka. Bhalisa kwiNkqubo yoRhwebo yaseMelika yaseMelika yokufumana isimahla, eyenzelwe inkcubeko ukunceda ukuyeka icuba, kubandakanya:
Iifowuni zoqeqesho ezili-10 ezinabaqeqeshi abazinikeleyo bomthonyama
Ukuya kuthi ga kwiiveki ezisibhozo zeepatches zasimahla, intshungama okanye ilotshi
Ujoliso ekusetyenzisweni kwecuba, kubandakanya icuba elingenamsi
Uncedo oluyekileyo lwenziwe kwaye luvuleleke kubo bonke abantu bomthonyama baseVermont, kubandakanya nolutsha olungaphantsi kweminyaka eli-18
I-Quitline yaseMelika yaseMelika yokuThengisa ngeCuba yaphuhliswa ngengxelo evela kumalungu eSizwe kumazwe aliqela.
Ibali likaMama woMdumba
Fowuna mahala 1-855-372-0037 ukunxibelelana ngokuthe ngqo nabaqeqeshi beNkqubo yecuba laseMelika laseMelika.
Abaqeqeshi aba-3 bathatha iminxeba ngoMvulo-Lwesihlanu, nge-8: 30 kusasa ukuya kwi-9 pm EST.
Unako nokufikelela kubaqeqeshi beenkqubo zaseMelika zaseMelika zecuba ngokuthengisa umnxeba I-1-800-QUIT-NAMHLANJE.
Tyelela Inkqubo yaseMelika yokuThengisa ngokuThengisa Website.
Fikelela kwizibonelelo ezongezelelweyo kubandakanya iibhodi zemiyalezo, izixhobo zemfundo, ukucwangciswa kokuyeka ukwenza inkqubo kunye nokuyeka ukulandelela inkqubela phambili.
Ukufunda ngakumbi ngecuba kunye nesiko kunye nokufikelela ngakumbi kwizibonelelo, ndwendwela Yigcine ingcwele: Inethiwekhi yeSizwe yeNative .